Japana: Ny lazan’ny tolotra Q&A · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Jona 2008 14:46 GMT
Voka-pikarohan’ny NetRatings Japan, Inc. [ja] nivoaka ny 23 May ary nivoaka tao amin’ny japan.internet.com [ja] no namoaka fironana vitsivitsy nanaitra [ja] nalaina avy amin’ireo mpampiasa aterineto Japoney. Tanatin’izany rehetra izany, ny fanadihadiana no nahita fa arakaraky ny fitombon’ny fotoana lanin’ny olona eo amin’ny aterineto, dia toa tsy ary ambony tsy ary ambany ny isan’ny pejy voatsidika, tsy arakarak’izay nantenain’ny betsaka.
Tsikaritry ny fanadihadiana ihany koa ny lazan’ny tolotra Q&A, indrindra indrindra fa ny tolotra Yahoo! an’i Chiebukuro (知恵袋) natomboka ny 2004, izay nahitana fisondrotana misongadina tokoa tato anatin’ny taona vitsivitsy. Raha pejy niisa 1.72 tapitrisa no nisy nitsidika tao amin’ny Chiebukuro tamin’ny 2006, niakatra ho 12.62 tapitrisa izany tamin’ny Marsa 2008. (Tolotra japoney Q&A hafa manana ny lazany [ja] toy ny OKWave [ja], goo’s “oshiete!” [ja], sy Hatena Question [ja].) Navoitran’ny fanadihadiana fa raha 25,7% ihany no tratry ny Yahoo! Chiekibukuro[ja] tao Japana, ny tratry ny tolotra “Yahoo!Answers” any Etazonia dia 9.4% fotsiny raha mitaha aminy. Wikipedia koa dia nahatratra avoavo ihany 37.8% tao Japana, mitaha amin’ny 24.5% any Etazonia (Fanadihadiana iray hafa, voadika ao amin’ny Izay Eritreretin’i Japana, dia milaza fa ny Japoney dia matoky kokoa ny Q&A toy ny fitokiany amin’ny Wikipedia.)
Tanaty hafatra iray mitondra ny lohateny hoe “Misafidy ny Wikipedia sy ny FAQ ny Japoney”, no anehoan’ny mpitoraka bilaogy ny fanamarihany momba ny fahasamihafana tsikariny eo amin’ny mpampiasa aterineto Amerikana sy Japoney:
日本人はアメリカ人と違って、人前でオープンに議論するということが苦手である。「人には聞けない事をこっそり調べる」という欲求にネットは合っているの かもしれない。ネットのＦＡＱが流行るのもそうしたこともあるのかもしれない。身近の人間には訊きずらいが、ネットで匿名だと訊きやすいので初心者ＦＡＱ なども大いに賑わう。ネット上の「教えて君」である。これも自分では積極的に調べようとしない、安易にネットで訊けばいいという、やはり思考停止の反映の １つにも思える。それに??? Yahoo!??? のように丁寧に答えてくれる人もいるが、思考停止を指摘するのが「ググレカス」であろう。
Samihafa amin’ny Amerikana ny Japoney noho izy ireo tsy dia marisika loatra amin’ny fanehoan-kevitra imasom-bahoaka. Tsara fahatongavana ny Aterineto, angamba, ho an’ny faniriana “hikaroka an-katakonana (miafina) mikasika zavatra iray tsy sahy anontaniana ny hafa [imasoimaso / mivantana].” Anisany manana toerana aminn’izany koa ny lazan’ny FAQ amin’ny Aterineto. Rehefa sarotra ny manontany ny olona akaiky anao, mora ny manontany tsy mitonona anarana ao amin’ny aterineto, izany no maha be mpampiasa ireo FAQs natao ho an’ny zazavao. Io no aterineto “oshiekun” [olona mangataka ny hafa mba hamaly nefa tsy mila akory mamantatra mialoha ny mombamomba azy ireo]. [Ity fironana ity] mikaroka toro-hevitra amin’ny aterineto, tsy ilana akory ezaka be handalinan’ny tena manokana (irery), dia azo adika tsotra aty am-parany ho fitaratry ny tsy fampiasan-tsain’ny olona intsony. Etsy ankilan’izany kosa anefa dia misy ireo olona izay mamaly am-pahatsorana toy ny Yahoo! Chiebukuro, ny fivandravandran’ny tsy fampiasan-tsain’ny olona dia azo adika ho toy ny “Gugurecus” [fiteny enti-milaza zavatra toy ny hoe “tairo Google, ry sagnagna a!”, ampiasaina matetika amin’ireny fafana fampahafantarana ireny].
Na izany aza, toa fihetsika sadasada ihany ilay izy rehefa manandrana na mitady zavatra amin’ny aterineto ianao, mampiditra teny famantarana fotsiny dia “mitady fanazavana amin’ny Google Sensei”, dia avy eo [saino hoe inona] ny zavatra mivoaka avy any dia avy amin’ny Yahoo! Chiebukuro. Mitady zavatra any amin’ny Google ianao, dia ilazana fa “ any amin’ny Yahoo! ny valiny”, [izay ilay sadasada]. Raha izay no tena fandehan’ny aterineto, dia izay izany, nefa ihany …
Anaty vokatra hafa, ny fanadihadiana dia nanamafy koa ny laza tsy nampoizina azon’ny tarento japoney eo amin’ny Eterineto. Ny bilaogy [ja] an’ilay mpisehatra Kamiji Ysuke manokana dia nanambara ho nahazo mpitsidika manodidina ny iray tapitrisa, ka isaky ny fampidirana iray dia ahitana fanamarihana eo anelanelan’ny iray alina ka hatramin’ny dimy arivo sy iray alina ao anatin’ny ampahan’ora vitsy monja. Maro ny fanamarihana ao amin’ny bilaogy tarento izay misy ihany ny sasany [ja] mihevitra ny mpanoratra-fanamarihana ho tsy dia manaraka ny lalam-pisainana maha-olombelona loatra [ja].
Isaorana i Nakajima Taku sy Yamamoto Yu tamin’ny fanolorana soso-kevitra sy fikarohana ity lohahevitra ity.